Umhambisi wamanzi → I-HoReCa • Amahhotela
Udinga i-dispenser yamanzi ehhotela, indawo yokudlela? Inkampani yaseWater Point iyanikezela abahambisa amanzi ngaphandle kwamabhodlela, abaphuzayo, Umthombo wabaholi bomhlaba embonini, esingaba ngumhambisi kuphela ePoland.
Ikhwalithi enhle amanzi ibalulekile empilweni futhi kufanele ihlale ikhona, ekhaya nasemsebenzini.
Futhi ezindaweni ezifana izindawo zokudlela, amathofi, imigoqo i amahhotela kubalulekile ukuthi izivakashi zihlale zinokufinyelela okungenamkhawulo emanzini ahlanzekile futhi anempilo.
Amanzi ahlinzekiwe kufanele ahlangabezane nokulindelwe abathengi, ngakho-ke ikakhulukazi imboni imboni I-HoReCa ePoland, isebenzisa izixazululo zomhlaba wonke, ihlomisa izakhiwo zayo ngezindawo zokuhlanza zamanzi ezihlanzekile nezinempilo manje, imithombo kanye nabaphuza umphakathi.
Ukusetshenziswa kobuchwepheshe obusha bokukhiqiza kuvumela ukwenziwa kwemikhiqizo ephezulu kakhulu yokusabalalisa amanzi ehlangabezana nokulindelwe ngamakhasimende afunwa kakhulu.
Izinceku ezihlongozwayo zivumela ukusetshenziswa kwansuku zonke kwekhwalithi enhle kakhulu yamanzi emahhotela, izivakashi, imigoqo kanye nezindawo zokudlela, i.e. noma kuphi lapho kudingeka ukunakekela ukuphepha kanye nempilo yezivakashi ezihambela lezi zindawo.
Isabalalisa samanzi ehhotela, endaweni yokudlela noma endaweni yokudlela kufanele kuvezwe ukusebenza kahle kakhulu kokuhambisa amanzi nobuchwepheshe bokupholisa obusetshenzisiwe.
Amadivayisi wokuhambisa amanzi okuphuza enzelwe isigaba seHoReCa kumele akhiwe ngendlela yokuthi aqinisekise ukuhlanzeka okuphelele kokusebenzisa.
Isisabalalisi esinjalo futhi singafakelwa ngokungezelelwe ngohlelo lokuhlunga kwamanzi noma isylinda ye-CO2.
Izitsha zamanzi zokudlela noma zokudlela ziqinisekisa ikhwalithi ephezulu yamanzi okuphuza asetshenziswa izivakashi.
Imithombo yanamuhla nemithombo yokuphuza amanzi ishibhile ukuyisebenzisa futhi isebenza kahle kakhulu, futhi idume kakhulu emakethe, iqinisekisa ukuhlonishwa kwendawo yokudlela, ikhefi noma ihotela, kanye nezinga eliphakeme kakhulu lensizakalo yezivakashi. Enye inzuzo ukwakheka kwanamuhla kwensiza, okwenza abaphuzayo bahlobise noma isiphi isikhala.
Isiphuzo samanzi okuphuza siqinisekisa ukufinyelela kumanzi asezingeni eliphakeme kakhulu kuwo wonke umuntu, ngaso sonke isikhathi.
Izinga lehhotela, irestirenti noma i-pub lithonywa, phakathi kwabanye, ngekhwalithi yamanzi okuphuza akhonzwayo lapho. Uma ilungiswe kahle futhi yakhonzwa kahle, ngokwesibonelo ekhefini elinezinyanisi neleminti, ngakho-ke kunambitheka okuhle futhi kubukeka kahle ngasikhathi sinye, nakanjani kuzothuthukisa isithombe sendawo.
Amnandi futhi asha, anama-sediments, chlorine kanye namagciwane, lawo manzi angaqhamuka kuzinqubo zanamuhla zokuphuza amanzi. Amanzi la ahlanjiwe, ahlanziwe angahanjiswa emabhodleleni noma kumaraara, noma ungenza ilamula aqabulayo kuwo.
Abantu abaningi basebenzisa imishini yokuhlanza amanzi emisha emakhaya abo futhi balindele ukuthi uma besebenzisa izinsizakalo zehhotela noma indawo yokudlela, bazosebenzisa namanzi anempilo futhi ahlanzekile.
Ukuhlinzeka ngamanzi avela lapho kusabalalisa khona kuzoba nomthelela omuhle esithombeni sendawo, esikhathalela impilo yabavakashi bayo nendawo ezungezile, ngoba ngenxa yale divayisi inani lemfucumfucu ekhiqizwayo lehlisiwe kakhulu.
Amanzi alungiselelwe ngale ndlela angaba yimpatho enhle ehlobo kubo bonke labo bomile, futhi ngenxa yalokho abazonquma ngokuzithandela ukusebenzisa izinsizakalo zokudlela.
5 / 5 ( 24 amavoti )
umshini wokuthengisa amanziamanzi amahhala ehhotelaamanzi amahhala endaweni yokudlelaamanzi ashisayo ehhotelaamanzi amahhala ehhotelaisitsha samanziisitsha samanziisitsha samanziisitsha samanzi sehhotelaokhipha amanzi ezindaweni zokudlelaisitsha sokuhambisa amanzi se-carbonatedhc66l isitsha samanziintengo yokuqasha amanziisipompo sokuhambisa amanziabahambisa amanzii-carbonation yamanziisiqandisi esisebenzisa amanziumshini wokudonsa amanziithuluzi lamanzi we-gassingidivaysi yamanzi ekhabhoniAmanzi uqobo endaweni yokudlelaamanzi we-gastronomyamanzi yokudlelaamanzi akhazimulayo avela empompiniamanzi amaminerali ehhotelaamanzi emgqonyeniamanzi ku-gastronomyamanzi ehhotelaamanzi ku-cafeamanzi endaweni yokudlelathepha amanzi ehhotelathepha amanzi endaweni yokudlelaamanzi entwasahloboamanzi abandayo ehhotela